१८ दिनसम्म लगातार कोरोना सं’क्रमितको उपचारमा खटेकि अर्की चिकित्सकको मृ’त्यु ! – Khabarhouse
१८ दिनसम्म लगातार कोरोना सं’क्रमितको उपचारमा खटेकि अर्की चिकित्सकको मृ’त्यु !
Khabar house | २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १३:५१ | Comments
एजेन्सी । चीनमा थप एक चिकित्सकको मृ’त्यु भएको छ । कोरोना भाइरस वि’रुद्धको ल’डाईमा अ’ग्रपंक्तिमा रहेर बि’रामीको उपचारमा निरन्तर १८ दिनदेखि ख’टिइ रहेकि चिकित्सकको मृ’त्यु भएको चिनियाँ सञ्चार संस्था सिन्हवाले जना एको छ। ५१ बर्षीया छु हुई नान्झियांग मेडिकल कलेजकि उप-प्रमुख थिइन्। उनी कोरोना भाइरसबाट सं’क्रमित बि’रामीहरूको उपचार गर्ने टोलीको सह प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेकि थिइन्।
लगातार १८ दिनसम्म बि’रामीको उपचारमा ख’टिरहेकि उनको ‘अ’चानक’ मृ’त्यु भएको हो। नान्झियांग अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दैछु हुई सबै चिकित्सकका लागि एक उदाहरणीय नेतृत्व भएको उल्लेख गरेको छ। आफ्नो ख्याल नगरि बि’रामीको उपचार मा खटिएकि उनी ‘रोल मोडेल’ डाक्टर रहेको अस्पतालले जनाएको छ।
घा’तक यस भाइरस बाट बि’रामीको उपचारमा ख’टिएका चिकित्सकै समेत ज्या’न जाने गरेको छ। घा’तक भाइरस वि’रुद्धको ल’डाइमा चीनले अहिलेसम्म ८ जना चिकित्सक गु’माएको छ। उक्त भाइरसका कारण मृ’त्यु हुनेको संख्या बिहिबारसम्म १३ सय १० पुगेको छ । ६० हजार मानिस संक्रमित भएका छन्।